Makambani eMangoda Oramba Kunzwa Komiti yeParamende
Vari kuongorora zviri kuitika panyaya dzemangoda vanoti zviri kuitwa nemakambani aya pamwe negurukota rezvemigodhi, zvekuzvidza komiti yeparamende, zvinogona kuvasvitsa muna taisireva.
Bazi rezvemigodhi rinonzi ranyorera tsamba makambani ari kuchera mangoda kwaMarange kuManicaland, richiudza makambani aya kuti asamiswe pamberi pekomiti yeparamende iri kuferefeta nyaya yemangoda ekwaMarange.
Izvi zvabuda pachena neMuvhuro apo imwe yemakambani aya, yeCanadile Miners, yapa komiti iyi gwaro rabva kubazi rezvemighodhi ranga richirambidza kambani iyi kumira pamberi pekomiti iyi. Kambani iyi yaudza komiti iyi kuti iri kutevedzera danho ratorwa nebazi rezvemigodhi.
Sachigaro wekomiti iyi, uye vari nhengo yeZanu PF mudare reHouse of Assembly, VaChindori Chininga, varamba kutaura zvange zviri mugwaro iri. Asi VaChininga vaudza vatori venhau kuti kana vakatevedzera zviri mugwaro rakanyorerwa Canadile Miners, havaoni imwe yemakambani aya, yeMbada Diamonds, ichiuuya kuzopa humbowo kukomiti yavo.
VaChininga vatiwo kana vakuru vakuru vebazi rezvemigodhi, avo vari kutarisirwa kumira pamberi pekomiti iyi svondo rino, vanogona kutadza kuuya kuzopa humbowo kukomiti yavo.
Komiti iyi yange yakatarisirwa kunzwa humbowo kubva kuCanadile neMbada Diamonds. Komiti iyi inotarisirwa kusangana nemunyori mubazi rezvemighodhi, VaThankful Musukutwa, neChipiri, kozoti nemusi weChitati, gurukota rezvemigodhi, VaObert Mpofu, vari kutarisirwa kumira pamberi pekomiti iyi.
VaChininga vati komiti yavo ichanyorera zvakare makambani aya pamwe nemunyori webazi rezvemigodhi, uye gurukota rebazi iri, kuti varemekedze paramende nekuuya kukomiti yavo kuzopindura mibvunzo maererano nezviri kuitika kwaMarange.
VaChininga vati kusauya kwemakambani aya kuri kupedza nguva yenhengo dzekomiti yavo pamwe nekutambisa mari yedare reparamende.
Vati Chinangwa chekomiti yavo ndechekuda kuti mangoda acherwe negwara rakanaka, kuitira kuti nyika ikwanise kubudirira nemari inowanikwa mukutengeswa kwemangoda ari munyika.
VaChininga vati komiti yavo ichapa makambani aya pamwe nevebazi rezvemigodhi mumwe mukana zvakare wekuti vauye kuparamende vazobvunzurudzwa. Vati kana vakaramba, dare reparamende ndiro richazotora matanho.
Nyaya yemangoda ekwaMarange iri kunetsa zvikuru munyika. Kubva muongororo yakaitwa nekomiti iyi, zvinoratidza kuti kucherwa kwemangoda kuri kuitwa nenzira isina kururuma. Veruzhinji, kusanganisirawo kambani yehurumende yeZimbabwe Mining Development Corporation, havasi kunyatsozivawo kuti zvinhu zviri kufamba sei kwaMarange.
Asi komiti yaVaChininga inoti ichaedza pese painogona napo kuti igadzirise nyaya yemangoda ekwaMarange.
Munyori weparamende, VaAustin Zvoma, vakaudza komiti iyi svondo rapera kuti ine masimba pasi pemutemo we Privileges, Immunities and Powers of Parliament Act, kuudza vanhu vari munyaya dzemangoda, kuti vauye kuzomira pamberi payo. Vakatiwo vanenge vazvidza komiti iyi, vanogona kuomeserwa nemitemo yenyika.
Vari kuongorora zviri kuitika panyaya dzemangoda vanoti zviri kuitwa nemakambani aya pamwe negurukota rezvemigodhi, zvekuzvidza komiti yeparamende, zvinogona kuvasvitsa pana taisireva.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vari mutungamiri weCentre for Research and Development, Va Farai Maguwu, vanoti kuramba kuri kuita makambani aya kumira pamberi pekomiti yeparamende kunoratidza kuti vane zvizhinji zvavari kuda kuvanza.